गर्मीमा राति निद्रा लाग्दैन ? यी खानेकुरा खानुस् ! - Dhangadhi Khabar
आइतबार १९, मङि्सर २०७८ ०८:२९
गर्मीको मोसममा धेरै मानिसलाई भोक नलाग्ने र निद्रा नआउने समस्याले सताउँछ । गलत खानपान पनि यसको कारण हुन सक्छ । पोषणयुक्त आहारको कमीले पाचन प्रक्रियामा गडबडी आउँछ अनि यही कारण निद्रा बिग्रिन्छ ।
भिटामिन, मिनरल्स तथा अन्य पोषक तत्त्वले भरपूर खाना नै खानुपर्छ सधैं । बाहिरको खानेकुरा सकेसम्म नखानुस् । अनि राम्रो निद्राका लागि तल उल्लेख गरिएका खानेकुुरा खानुस् ।
फर्सी धेरै लाभदायक तरकारी हो । यसमा भएको ट्रिप्टोफानले शरीरमा अत्यावश्यक सेरोटोनिन उत्पादन गर्छ । सेरोटोनिन दिमागमा हुने रसायन हो जसले मूड फ्रेश गर्छ, उदासी हटाउँछ र डिप्रेसनबाट बाहिर निकाल्छ । यसले राम्रो निद्रा पनि ल्याउँछ । यसमा भएको पोटासियम र फाइबरले पाचन प्रक्रिया तथा चिनीको स्तरलाई पनि सन्तुलनमा राख्छ ।
गर्मीमा कुनै हालतमा पनि शरीरमा पानीको कमी हुन दिनु हुँदैन । यसका लागि हरिया सागसब्जी, फल र लगातार पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ । शरीरमा पानीको कमी भयो भने पनि निद्रा लाग्दैन । लौकाको तरकारी र लौकालाई दहीमा मिसाएर राइता अवश्य खानुस् । यसले शरीरलाई ठण्डा राख्छ ।
निद्राको समस्या भएका मानिसले उमालेको वा भुटेको आलु खानु राम्रो हुन्छ । यस्तो आलु छिटो पच्छ र शरीरमा गर्मी पैदा हुन दिँदैन । अनि निद्रा राम्रो पर्ने नै भयो ।
गर्मीमा हाम्रो शरीरबाट असाध्यै पानी निस्कन्छ किनकि पसिना खुबै चुहिन्छ । त्यसैले पानीको स्तर कायम राख्नु जरूरी हुन्छ । सजिवन खाँदा त्यसमा भएको ९५ प्रतिशत पानी र २५ प्रतिशत क्यालोरीले शरीरमा पानीको कमी हुन दिँदैन ।
आइतबार ०६, भदौ २०७८ ०९:२१ मा प्रकाशित
भारतीय गाडीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु, बिहानैदेखि राजमार्ग अवरुद्ध
काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशन मा बलायरको अग्रता कायमै
तौल घटाउन चाहानुहुन्बछ ? यदि चाहानुहुन्बछ भने अपनाउ यी उपायहरु
राजेन्द्र लिङ्देन समूहबाट राणा महामन्त्री पदमा विजयी : राप्रपा
विश्वभर थप ५ लाख २३ हजार बढी कोरोना संक्रमित थपिए, ३ लाख ७५ हजार बढी संक्रमणमुक्त
सर्वाधिक मत ल्याए , राप्रपाको उपाध्यक्षमा विक्रम पाण्डे विजयी
‘जवाद’ चक्रवात कमजोर, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केहि स्थानमा भारी हिमपातको सम्भावना
रेखा थापा राप्रपा महामन्त्रीमा पराजित, कुन्ती विजयी